Powder Lorcaserin HCL Raw (846589-98-8) Mpanamboatra - Phcoker
Ny vovo-drongony Lorcaserin hydrochloride dia agonista mpandray ny serotonin 2C (5-HT2C) izay mitondra….
Ny vovo-dronono Lorcaserin hydrochloride dia hydrochloride azo tamin'ny valin'ny vovoka lorcaserin miaraka amina asidra hydrochloric iray. Natao ho fanafody fanoherana ny hatavezina. Lorcaserin hydrochloride dia agonista mpandray 5HT2c voatondro hampiasaina amin'ny olon-dehibe miaraka amin'ny BMI ≥30, na ireo izay manana BMI ≥27 ary farafaharatsiny farafaharatsiny mifandraika amin'ny lanjany toy ny fiakaran'ny tosidrà, diabeta karazana 2 na dislipidemia. mitaona fahatsapana fahafaham-po, ary heverina fa hisoroka ny rotsak'orana ny valvular cardiac valvular mifandray amin'ny fampahavitrihana ireo mpandray 5-HT2B, ny faritry ny ati-doha fantatra fa mitana andraikitra lehibe amin'ny fifehezana ny hanoanana sy ny fihinanana sakafo. Amin'ny alàlan'ny fampiatoana ireo mpandray ireo, ny vovo-dronono Lorcaserin hydrochloride dia mety hampihena ny fanjifana sakafo amin'ny fihenan'ny fahazotoan-komana ary hahatonga ny olona hahatsapa ho voky na dia mihinana sakafo kely noho ny mahazatra aza. nankatoavin'ny FDA androany tamin'ny fanapahan-kevitra lehibe taorian'ny fizahana 2 taona.
Ny vovo-dronono hydrochloride Lorcaserin dia miasa amin'ny fifehezana ny fahazotoan-komana - indrindra amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo mpandray ny ati-doha ho an'ny serotonin, neurotransmitter izay miteraka fahatsapana fahafaham-po sy fahafaham-po. Ny fidirana amin'ny sakafo dia fehezin'ny foibe feno fahafaham-po, miorina ao amin'ny ivon-toeran'ny hypothalamus sy ivon-hanoanana misy ao amin'ny hypothalamus eo an-damosina. Ny fampidirana isan-karazany avy amin'ny foibe avo kokoa sy ny taratasy mivalona amin'ny gastrointestinal dia mivondrona ao amin'ny atin'ny arcuate, izay misy karazana neurônina roa mifehy ny fihinanana sakafo. Voalohany, vondrona manaitaitra ny fihinanana sakafo mamokatra proteinina mifandraika amin'ny agouti sy neuropeptide Y; ary faharoa, ny vondrona misakana ny fihinanana sakafo misy kôkainina sy amphetamine mifehy transcript (CART) sy pro-opiomelanocortin (POMC) neurons. Ny POMC dia misy mpandray 5-HT 2C, izay rehefa mavitrika dia mamoaka hormonina mandrisika alfa-melanosit (alfa-MSH) .Ny neurons manakana sy manentana roa dia mandroso hatrany ny atin'ny paraventricular ao amin'ny hypothalamus. Ny nucleus paraventricular dia misy receptor melanocyte 4 (MC4R) izay manakana ny fahazotoan-komana amin'ny fatra ara-pitsaboana lorcaserin hydrochloride vovoka dia miasa ho agonista 5-HT 2C voafantina amin'ny neurons POMC, izay miteraka famoahana ny alfa MSH. Ny alfa MSH fanampiny dia miasa amin'ny MC4R amin'ny paraventricular nucleus ao amin'ny hypothalamus, mitarika ny fihenan'ny fahazotoan-komana. Amin'ny fatra supratherapeutika, lorcaserin hydrochlorider koa dia miasa amin'ny mpandray 5-HT 2B sy 5-HT 2A.
Ny vovo-dronono Lorcaserin HCL dia miseho amin'ny endrika takelaka ary alaina in-1-2 isan'andro, miaraka na tsy misy sakafo. Ny Lorcaserin dia tsy maintsy ampiasaina miaraka amin'ny sakafo kaloria mihena sy drafitra fanatanjahan-tena.
Ny fatra omen'ny vovo-dronono lorcaserin hcl dia 10 mg hotantanan'ny vava indroa isan'andro. Lorcaserin dia azo alaina tsy misy fijerena sakafo. Ny Lorcaserin hcl dia tokony hajanona amin'ny marary izay tsy mahatratra farafahakeliny farafahakeliny 5% amin'ny herinandro 12 satria ireo marary ireo dia mety tsy hiaina lanja mavesatra amin'ny fitsaboana mitohy.
Ny vovo-dronono Lorcaserin Hcl dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny fitantanana lanja mavesatra amin'ny olon-dehibe manana index body mass (BMI) 30 na mihoatra (matavy) ho fanampin'ny sakafo sy fampihenana kaloria mihena. Izy io koa dia ekena ho an'ny olon-dehibe manana BMI 27 na mihoatra (matavy loatra) ary manana farafaharatsiny farafaharatsiny misy lanjany toy ny tosidra (fiakaran'ny tosidrà), na ny kolesterola avo (dislipidemia). Na izany aza, mety misy vokany hafa ihany koa io. Toy ny etsy ambany:
Vovoka Cetilistat manta (282526-98-1)